Pucon Beach, Beach Pukon - Chile
Adiresy: Chili, Araucanius, Cautin, Pucon.
Anatin'ny fanombohana ny moron-dranomasin'i Chile, ny iray amin'ireo toerana voalohany dia ny moron-dranomasin'i Pucon - tena paradisa ho an'ireo avonavona. Ny volkano volokano mainty, ny rano mangatsiaka sy ny endriky ny saina dia mamaritra ny maha-tokana an'ity toerana ity. Amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny manapaka tanteraka ny mahazatra ary mandry eo amin'ny farihy, mandinika ny natiora manodidina. Ao anatin'ny fialamboly dia tsy misy ny tsy fahampiana - Ny tora-pasika Pucon dia manome safidy maro ho an'ny fanangonana ny tsirony rehetra!
Mijanona eo amoron-dranon'i Pucon
Fantatrao ve ireo tanàna maro eo anelanelan'ny farihy tsara tarehy sy volkano goavana? I Pukon dia antsoina hoe "renivohitry ny fizahan-tany mavitrika", ary tsy ny mponina ihany - fantatra any lavitra any Chili , ho iray amin'ireo foibe ara-toekarena sy toeram-ponenana. Saingy ny olona dia tonga any Pucon tsy hoe hianika volkano na onenan'ny renirano. Ny fialan-tsasatra any amin'ny farihy Villarrica, eny amoron-dranomasina miaraka amin'ny volkano mahafinaritra dia malaza koa. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny moron-dranomasina dia eo akaikin'ny trano fandraisam-bahiny. Manakaiky ihany koa ireo trano fisakafoanana marokoroko, izay misy sakafo matsiro, tany am-boalohany, ary, manan-danja, sakafo tsy dia lafo. Ny fasika mainty mainty miaraka amin'ny zaridaina maitso dia toa tsy mahazatra ary manamarina ny asan'ny volkano teo aloha. Na izany aza, ny volokano ary ankehitriny dia manazava ny manodidina ny mena, izay manome fitsaharana any amoron-dranomasina fanampiny iray. Ny fitsidihana ny moron-dranomasina dia tsara kokoa ny misafidy ny volana fahavaratra, fa raha ampy tsara ianao, afaka manararaotra ianao ary mankanesa any Pucon amin'ny lohataona na ny fararano. Ny rano ao amin'ny farihy dia mangatsiaka, ary matetika ianao dia mahita sary mahatalanjona ho an'ireo mpandray anjara, rehefa feno vakansy ny torapasika, ary ao anaty rano - tsy misy olona. Fiarandalamby, fanjonoana, fitsangatsanganana, rafting, yachting - lisitra tsy feno izay azonao atao any amoron-dranon'i Pucon. Ny manodidina ny tanàna dia tonga lafatra ho an'ireo olona izay miezaka miaina eo an-tratran'ny natiora, mba hitady firaisana amin'ny tontolo manerantany na hankafizo ny toeram-ponenana be tendrombohitra. Ary ireo izay tsy mahatsapa ny fiainana an-davanandro, dia aleo izy ireo hitsidika ireo trano fandraisam-bahiny sy birao misy kaonty tsara.
Pucon beach dia hita ao Pucon , faritra Araucanía, Chile. Avy any Santiago (800 km) dia misy bisy mahazaka maro, ho safidy - hanofa fiara ao an-drenivohitr'i Chile ary hiditra any. Ny seranam-piaramanidina akaiky akaiky dia 80 km miala ny tanànan'i Temuco. Be matetika matetika ny fiaramanidina, satria maro ireo olona te-hitsidika ireo faritra ireo.
Distrika Playa Ancha
Tranom-bakoky ny Teratany Avaratra-Columbiana
Hotely avy amin'ny sira
Lolo vita amin'ny taratasy hosodoko
Soavaly tsy mahatsiaro
Ny haavony sy ny lanjan'ny Wesley Snipes
Manicure miaraka amin'ny stickers
Fotsy volamena misy diamondra
Mpikarakara ny fitehirizana zavatra
Fitaovana fampiasa amin'ny kofehy novosirina
Ireo akanjon'ny vehivavy marevaka
Accessories ho an'ny akanjo mena
Fanompoam-pivavahana ho an'ny olona 12
Boeing 737 800 - drafitra anatiny
Corks amin'ny alim-bolana
Ahoana ny fomba fisainanao ny zana-tsipìka?
Trondro maitso - tsara sy ratsy
Afovoany ny balkon
Ny firenena mampidi-doza indrindra eran-tany